Marabigani ma is waydiiyey Ceerigaabo yaa ka taliya? | allsanaag
Wuxuu ka soo jeedaa beelaha Warsangeli beesha ugu degaanka weyn degmada Ceerigaabo iyo degaanada hoos yimaada. Maanta wuxuu ku calaacalayaa Muxuu Isaaq gobolka Sanaag Gudoomiye gobolka ugu soo magcaabi waayey nin ka soo jeeda beelaha Harti. Marabigani ma is waydiiyey Gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada maxaa ka wad dhigay Habar yoomis. Golaha degaanka degmada Ceerigaabo imisaad ku leedahay oo aad raali ahayd muddo dheer.
Siciid Bidaar, oo ka soo jeeda beesha Nuux Cumar ee Warsangeli oo aad ka daawan doontaan muuqaalka hoose, Warsangeli Diid oo ka soo jeeda Beesha Adan Siciid iyo qof kale oo aan ka gaabsanayno inaan magac sheegno waa sadexda Qof ee jabhaddii SNM ku raacay jacayl ay qaadeen sideetameeyadii iyaga oo dhalinyaro ah , kuna suganaa degmada Ceerigaabo
Maqaal hore ALLSANAAG 10 May 2012
Ceerigaabo ama la wada yeelay ama la wada waa ama la kala qaybsey?
Magaalada Ceerigaabo oo xarun u ah gobolka Sanaag waa magaalada Soomaaliya ugu quruxda badan, ugu cimilada wanaagsan, sidoo kale waxa magaalada dhinaca waqooyi ka xiga Buuraha silsilada Golis oo ay ka mid tahay buurta ugu dheer Soomaaliya ee Surad.
Magaalada Ceerigaabo dhowr iyo labaatan sano ka hor waxay ahayd Hooyada ganacsiga Gobolada waqooyiga Soomaliya sida Gobolka Sanaag oo ay xarun u ahayd ,Gobolka Bari, Nugaal , Sool iyo Togdheer hase ahaatee waxa bedelay horumarkii wanaagsanaa iyo isdhexgalkii Bulshada magaalada iyo tii goboladaba nabad iyo wada noolaasho diidayaal aan talin jirin oo magaaladii siday tahay ka dhigay maanta . Bur burkii qarankii Soomaaliya ka dib ,waxa Magaalada Ceerigaabo hoy ka dhigtay ama u soo guuray Buuraley, waxayna magaaladii horumarka tiigsanaysay, kana horaysay Soomaali inteeda kale dib ugu celiyeen boqol sano ka hor sidii ay ahayd iyaga oo magaaladii ka dhigay magaalo aan laga soo hadal qaadin gudaha Soomaaliya iyo dibadaba Magaalo aan horumar lahayn, Ha’ayado shisheeye ayna joogin , Siyaasada Soomaaliya aan cid u matashaa ku jirin Dawlada KMG. Intaa waxa u sii dheer Eeyda iyo Ariga tirada badan oo magaalada dhexdeeda lagu dhaqdo oo daaqsin ka dhiganaya dhirtii qurxoonayd ee magaaladu caanka ku ahayd.
Magaalada Ceerigaabo, waa magaalo ay wada degi jireen qarniyo badan labada Beelood ee Daarood iyo Isaaq, halka Beesha Daarood waligeed ahayd Beesha gacanta ku haysay siyaasada iyo ganacsiga Magaalada, ka hor intii aan jabhada SNM Ceerigaabo ku abuurin Buuraleyda mushahaarka yar lagu siiyo in ay Magaalada ka ilaaliyaan Daaroodka.
Gorgortanka Siyaasadeed iyo xilliga kala guurka Magaalada Ceerigaabo waxay haysataa fursad aad u wanaagsan oo ah wada hadalka u dhaxeeya Soomaliya iyo maamulka SNM, sababtoo ah Wasiirka arimaha gudaha Puntland Cabdulaahi Ilko jiir isaga iyo awoowayashiisba waxay ka soo jeedaan magaalada Ceerigaabo waana sababaha ugu weyn oo maamulka Hargaysa oo diidan yihiinin wasiirda Puntland ah ee ka soo jeeda beesha Daarood in ay qayb ka noqdaan wada hadalka u dhaxeeya SNM iyo Soomaalida midnimada doonaysa.
Magaalada Ceerigaabo oo ay jabhadii SNM ee Siilaanyo xukumi jiray isku dayday Sideetameeyadii inay xoog ku qabsadaan magaaladaas, ayaa waxa ka difaacay Mujaahidiintii degaanka u dhashay ee HARTI, sidoo kale ilaa maanta xoog laguma haysto Ceerigaabo mana joogo Ciidan xoog ku haysan kara oo ka soo jeeda Beesha Isaaqa hase ahaatee dhibka ugu weyn oo magaalada qabsaday waa ganacsatadii Harti oo dhaqaalaha ku lahaa magaalada oo ganacsigoodii u raray Magaalooyinka Laascaanood, Boosaaso iyo Badhan.sidoo kale aqoonyhanadii u dhashay magaalada oo ka soo jeeday Beesha Harti oo iyaguna ka gaabiyey wacyi gelintii Bulshada iyo caalamka oo ahayd in magaalada Ceerigaabo tahay magaalo la wada dego oo ayna Beel gaar u lahayn ama SNM gooni u lahayn.
Ugu danbayntii Hadii Caalamku iyo dawlada Soomaaliya ay go’aansadaan in Beesha Isaaqu ka g’oaan Soomaali inteeda Kale, waxa waajib ah in laga wada hadlo Khadka cagaaran ee Gobolka halka uu mari doono oo kala qaybin doona beelaha Daarood iyo Isaaq. Sidoo kale wada hadalka u dhaxeeya Soomaali iyo Beesha Isaaqu oo caalamku ugu baaqay in ay wada hadlaan waa in loo sheegaa jabhada SNM in magaalada Ceerigaabo la mid tahay magaalada Gaalkacayo oo iyaduna qaybsami karto oo hadii wiilka Isaaq oo Berbera ku nool uu sheegto Ceerigaabo IN sidoo kale UU xaq u leeyhay sheegashadeeda magaalada Ceerigaabo wiilka Garbaharey Jooga ee Daarood.
← Dawlad ma ku sheegi lahayd Duulkan? Dekeddii macmalka ahayd iyo Doontii oo kulmay →